Monday, 29 November 2010 01:06	नागरिक
समुन्द्र पौडेल, गोरखा (लिगलिगकोट), मंसिर १३ - लिगलिकोटबाट माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँगै आँपपिपल-४, बिजुलीडाँडा झरेपछि आँखा अगाडि देखिएका हिमश्रृंखला औंल्याउँदै उनकी पत्‍नी एवं माओवादी नेतृ हिसिला यमीले भनिन्, 'बाबुराम, हिमाल हेर त!'
'पहिला दिनदिनै यी हिमाल हेरिन्थ्यो,' बाबुरामले बाल्यकाल सम्भि्कए, 'स्कुल पढ्दा मकालु, अन्नपूर्ण हिमालकै नामबाट समूह बनाइन्थ्यो, आँपपिपल पढ्दाचाहिँ चेपे, मर्स्याङ्दी नदीका नाममा समूह थिए।'
माओवादीको छैटौं विस्तारित बैठक शनिबार सकिएपछि आइतबार बिहानै बाबुराम दम्पति लिगलिगकोट उक्लिए। उनीहरू पालुङटारबाट आँपपिपल-४, बिजुलीडाँडासम्म गाडीमा र त्यहाँबाट आधा घन्टा पैदल हिँडेर लिगलिगकोट दरबार पुगे। उनीहरूलाई गाउँलेले फूलमाला लगाएर स्वागत गरेका थिए। दौडमा घलेहरूलाई हराएर द्रव्य शाह लिगलिगकोटको राजा भएपछि ४ सय वर्षअघि गोरखा राज्यको जग खनिएको थियो। त्यही लिगलिगकोट उक्लँदै बाबुरामले भने, .'अहिले दौडेर नेता बनिँदैन, विचारले बनिन्छ।'
एक वाइसिएल कार्यकर्ताले 'हाम्रो पालामा बनेको सिँढी' भनेपछि अनुहारमा पसिना निकाल्दै उकालो उक्लिँदै गरेका बाबुरामले पत्नीतिर हेर्दै भने, 'तिमीले बनाएको बाटो रे नि हिसिला!' हिसिलाले हाँस्दै भनिन, 'ए पर्यटन मन्त्रालयबाट बनेको रहेछ?' पर्यटन मन्त्रालयको एक लाख रुपैयाँ सहयोगसहित गाउँलेले गत वर्ष लिगलिगकोट दरबार जाने सिँढी ३ लाखको लागतमा बनाएका थिए।
'लिगलिगकोट पुरानो राज्य सत्ताको उद्गमथलो भए पनि इतिहासका कारण यसको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ,' टुप्पामा पुगेर दरबारका भग्नावशेष देखेपछि बाबुरामले भने, 'ऐतिहासिक महत्वसँगै विभिन्न हिमश्रृंखलाले यहाँ पर्यटन विकास पनि सम्भव छ।'
बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा लिगलिगकोट क्षेत्र विकासका लागि सहयोग माग गरेका गाउँलेले आइतबार पनि उनीसँग पुरानै कुरा उप्काए। 'अर्थमन्त्री हुँदा विकासका लागि आग्रह गरेका थियौं, तर गरेनन्,' स्थानीय गेहेन्द्र रानामगरले भने। बाबुरामको घर लिगलिगकोटबाट एक घन्टा दूरीस्थित खोप्लाङ- ४, बेलबासे हो।
पुरातत्व विभागबाट लिगलिगकोट विकास गर्न १ लाख रुपैयाँ आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'दस लाख माग्दा त्यत्ति चुहियो।' दरबारको जीर्णोद्धारसँगै लिगलिगकोट क्षेत्र विकास गर्न सके पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने उनले बताए।
पालुङटार नजिकै आँपपिपलस्थित अमरज्योति जनता माध्यमिक विद्यालयबाट २०२६ सालमा एसएलसीमा बोर्डफस्ट भएका भट्टराईले हर्मीस्थित महेन्द्र लीला निम्न माध्यमिक विद्यालयमा दुई महिना पढाएका थिए।
Rishi Devkota , Ampipal2Gorkha / Now Dammam , Saudi Arabia.
समाचारको लागि धन्यवाद! समुन्द्रजीको यो समाचारले गाउँको याद ताजा गरायो।
कुरा ठीक हो।
हाम्रो गोरखा साँच्चै राम्रो छ। बाबुराम त झनै महन् नेता हुनुहुन्छ।